Fivarotana bracelet & Paracord velona - China Survival Bracelet & Paracord mpanamboatra sy mpamatsy
Efa nijery ny "tafavoaka velona any an'ala" ve ianao? Ao amin'ity programa ity, ilay kintana malaza dia mitafy ireo bracelets & paracord velona. Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny fivelomana any an'ala. Ny fehin-tanana velona dia muti-functional, izay misy fitaovana azo ampiharina marobe toy ny antsy, ny fitsipika, ny hook carabiner, ny kompas, ny barometre sns sns. Ny antsy dia manampy amin'ny fanamafisana ireo rantsana rehefa ilaina any an'ala izany. Ilaina ny paracords rehefa miakatra any an'ala ianao. Ny tontolo iainana any an'ala dia tena manandanja tokoa, mety hanampy anao ireo, angamba mamonjy ny ainao. Na eo aza ny fampiasana any an'ala dia mety ho fitaovana velona amin'ny fiainana andavanandro ireo mba tsy ho voaratr'ireo mpandika lalàna. Maimaimpoana ny bobongolo raha misafidy ireo volavola efa misy anay ianao, 350/480/550 Paracord sy buckle plastika. Afaka nanampy ny laser tamin'ny laser voasokitra teo amin'ny lobolam-plastika izy io na afaka nanampy tamin'ny marika famantarana. Ny habe mahazatra dia 205 (L) * 22 (W) mm ho an'ny fehin-tànana. Na raha tian'ny mpanjifa ny habeny namboarina dia raisina an-tanan-droa. Miara-miasa aminay ianao dia ho lasa mahavariana amin'ny lafiny endrika, kalitao, fotoana fandefasana ary serivisy tsara indrindra aorian'ny fivarotana.
Fehin-tànana velona sy peratra